Blogger of this week : Gita Chaudhary - MeroReport
Blogger of this week : Gita Chaudhary
औरावनी, सुनसरीकि गीता चौधरी हाल तिनकुने काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आइरहेकी छिन । नेपालको इतिहास, संस्कृति र पुरातत्वमा एम ए गरेकी गीता महिलाहरुको पक्षमा वकालत गर्न रुचाउँछिन् । उनी नर्बेको विदेश मन्त्रालयद्धारा प्रायोजित FK Exchange Program अन्तर्गत १० महिना जाम्बियाको लुसाकामा अवस्थित जाम्बियन महिला संचारीका संस्था (Zambia Media Women Association ZAMWA)मा काम गरेर हालै नेपाल फर्केकी छन् । मेरोरिपोर्टमा पनि ब्लगिङ गर्ने गीताले आफ्नो ब्लगमा महिलाका मुद्दा, यात्रा वर्णन, तथा थारु संस्कृतिबारे लेख्ने गर्छिन् । यस हप्ता मेरोरिपोर्ट साताको ब्लगर बन्न सफल गीतासितको छोटो कुराकानी तल प्रस्तुत गरिएको छ :
आफ्नो ब्लगिङको इतिहास बताइदिनुस न ? तपाईं कसरी ब्लगिङमा आकर्षित हुनु भयो र कहिलेदेखि ब्लगिङ सुरु गर्नु भयो ?
मेरो ब्लगिङको इतिहास लामो छैन । लेख लेख्न रुची भए तापनि लेख्न सकेकी थिइन । अफ्रिकाको एक वर्षको बसाईको अनुभवहरु साथीभाइबीच बाँड्नका लागि जुन २०११देखि ब्लगिङ सुरु गरेकी हुँ । अरुको ब्लग पढ्दा आफूलाई पनि लेख्न मन लाग्यो र लेखेर ब्लगमा राख्न थालेँ ।
ब्लगिङका बारेमा धेरै जानकार नभएका कारण सुरुसुरुमा गाह्रो भयो तर पछि एउटा लेख ब्लगमा राख्न सफल भएपछि निकै खुशी लागेको थियो ।
म सुचनामुलक र संस्कृतिबारे बढी लेख्छु ।
धेरैजसो समाजिक बिषयबस्तुहरु समावेश छन् ।
एकैछिन तपाईंको ब्लगको लेखहरुको कुरा गरौँ । पछिल्लो पटक कुन बिषयमा के लेख लेख्नुभयो? के कुराले लेख्न अभिप्रेरित गर्यो ?
पछिल्लो पटक लैङ्गिक हिंसाका बारेमा लेखेकी थिएँ। अफ्रिका बसाईको क्रममा लैङ्गिक विभेद र महिलामाथि हुने हिंसाका बिषयबस्तुका बारेमा काम गरेकी थिएँ । त्यसैले लेख्नलाई अभिप्रेरित गर्यो ।
ब्लगमा ट्राफिक ठिकठीकै छ। मलाई लेख्नका लागि अभिप्रेरित गर्ने खालका प्रतिक्रिया पाइरहेकी छु।
ब्लगिङ गरेरै नाम र दाम कमाउन सकिन्छ भने यो क्षेत्र र यसको भविष्य नराम्रो होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
नियम कानुनको आधारमा चल्ने हरेक क्षेत्रको भविष्य राम्रो हुन्छ त्यसैले ब्लगिङमा पनि आचारसंहिता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ।
यो संजालले नागरिक पत्रकारिता प्रवर्द्धनका लागि गरेका हरेक कार्यहरु सराहनीय छन्।
तपाइले निरन्तर रुपमा मेरो रिपोर्टमा ब्लग पनि लेखिरहनु भएको छ, तपाईंलाई किन मेरो रिपोर्टमा योगदान गर्न मन लाग्छ ?
मेरो रिपोर्टबाट केही सिक्नका लागि केही गरेकी हुँ ।
नागरिक पत्रकारिताको प्रवर्द्धनका लागि निरन्तर लागी रहनुस् भन्न चाहन्छु।
गीताको ब्लग: Proud to beaTharu http://gitachaudhary.wordpress.com/
मेरो रिपोर्टमा उनका ब्लगपोष्ट पढ्न र उनलाइ साथी बनाउनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुस् http://meroreport.net/profile/GitaChaudhary
Comment by yadav humagain on January 24, 2012 at 6:05pm
Comment by Kranti Darai on January 20, 2012 at 8:57pm
Comment by Indra Dhoj Kshetri on January 18, 2012 at 3:49pm
Your writing is wonderful and bring different experiences. I congratulate you and wish all the best for your writing career. Keep writing and contributing to MeroReport.
Comment by Ajeeta Sigdel on January 18, 2012 at 3:02pm